Friday, 25 March 2016 07:31
* Rususha Alle ayaan rumaynayaa, Alle wuxuu ka doortay dadka rusulo, wuxuuna u waxyooday sharcigiisa, wuxuuna amray inay dadka gaarsiiyaan, qofka iyaga adeeco jannada ayuu galayaa, qofka iyaga warkooda diidana naarta ayuu galayaa.
* Ka dib wuxuu ku xoojiyay mucjisooyin oo caddeynaya runtooda si ay ugu kaalmaystaan dadka iyaga beeninaya oo ay marka u noqoto daliil.
* Rususha waxaa ugu horreeya nabi Nuux -nabadgelyo korkiisa ha ahaatee- waaxana ugu dambeeya nabi Muxamed -naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee-
* Iyaga waa dad, wayna cunaan, wayna cabbaan, wayna guursadaan, way xanuunsadaan, wayna dhintaan, iyaga waa dadka ugu fadliga badan oo Alle abuuray, macsiyadana waa laga ilaaliyay.
* Rususha Alle way badan yihiin, Alle Quraanka wuxuu ku sheegay: Maxamed iyo Ibraahiim Alle saaxiibkii ahaa, iyo Muuse Alle qofka uu la hadlay ahaa, iyo Ciise Alle kalimaddiisa ahaa, iyo Nuux kuwan waa ulul azmiga oo rususha ka mid ah -nabadgelyo korkooda ha ahaatee- iyo Ismaaciil iyo isxaaq iyo Yacquub iyo Haaruun iyo Ayuub iyo Yuunis iyo Sulaymaan iyo Daawuud iyo Yaxya iyo Zakariya iyo Huud iyo Saalax iyo Yuusuf iyo Shucayb iyo Ilyaas iyo Luud iyo Dul-kifli iyo Idiriis iyo kuwo kale badan, waxaa ka mid ah kuwo oo Alle Quraanka ku sheegay iyo kuwo uuna ku sheegin.
* Waxa ugu horreeya ay rususha ugu yeereen waa tawxiidka, waxa ugu weyn ay reebeenna waa shirkiga, dhammaantooda waxay la yimaadeen islaamka, iyo tawxiidka in laysugu yeero, waxaa kala duwanaaday keliya shareecooyinkooda iyo habka Alle ay u caabudaan, maxaayeelay waxaa kala duwanaa waqtiyadooda iyo dalalkooda.
* Rususha waxay dadka ugu bishaareeyeen imaanshaha nabi Muxamed -naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee- waxay fareen dadkooda inay rumeeyaan nabiga markii la soo saaro.
* Farqiga u dhexeeya nabiga iyo rasuulka waa: raasuulka waxaa loo waxyooday sharci cusub waxaana la faray inuu dadka gaarsiiyo, nabigana waxaa loo soo diray inuu sugo sharciga rususha ka horreysay.
* Waxaan rumaysanahay inuu yahay kan rususha ugu fadli badan xagga Alle nabi Muxamed -naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee- oo ah faraca nabi Ismaaciil ina Ibraahiim -nabadgelyo korkooda ha ahaatee- Alle dadka oo dhan ayuu u soo diray, wuxuu ku khatimay nabinimadiisa nabinimada anbiyada, risaaladiisana wuxuu ku khatimay risaalooyinka.
* Wuxuu ku xoojiyay mucjisooyin, wuxuu ka fadilay rusushiisa oo dhan, sida uu uga fadilay risaaladiisa risaalooyinka oo dhan, sharcigiisana sharciyada oo dhan, kitaabkiisana -Quraanka- kutubta oo dhan, ummaddiisana -muslimiinta- ummadaha oo dhan.
* Wuxuu siiyay rabbigiisa wax uuna siinin qof ka mid ah anbiyada oo isaga ka horreeyay waxaa ka mid ah:
1-Wasiilada: waa darajada ugu weyn jannada, Alle wuxuu u diyaariyay nabigiisa -naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee-.
2-Kowthar: waa webi jannada ku yaalla oo carshiga raxamaanka hoostiisa mara.
3-Darka: waa midka muslimiinta dad aan ahayn ka cabbaynin maalinta qiyaame, maalinta dadka ay oomayaan oo dhididka u tagi doono jilbahooda iyo dhexdooda iyo garbahooda -qof kastana waa sida camalkiisa uu yahay- muslimiinta waxay ku cabbayaan koobab uu nabiga ­-naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee- labadiisa gacmood sharafta badan uu ku siin doono, mana oomayaan dabadeed.
4-Shafaacada: waa booska la mahdiyay maalinta qiyaame: nabiga -naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee- Alle agtiisa ayuu ku shafeecayaa ilaa uu ka soo saaro caasiyaasha muslimiinta naarta, kuma harayo naarta qof oranaya: Ilaah kale ma jiro Alle mooyee Muxamedna waa rasuulkiisa, caasiga naarta kuma waaro, waa laga soo saarayaa marka laga soo nadiifiyo dambigiisa.
* Qofkii rumeeyo nabiyaasha dhamaantooda oo aan nabi Maxamed rumaynin naarta kama soo baxayo.
5- Ilaahay nabiga waa u gargaaray, ciidankiisana waa u gargaaray iyo dadka isaga raacsan ilaa maalinta qiyaame, wuxuu ku firdhiyay argaggax quluubta cadowgooda meel bil loo socdo marka loo soo jiro, nabi isaga ka horreeyay oo la siiyay arintaasna ma jiro.
6-Dhulkana waxaa looga dhigay isaga iyo ummaddiisa masjid iyo daahir nabiyaasha ka horreeyayna looma yeelin sidaas.
7- Alle isaga wuxuu u soo diray jinka iyo dadka dhammaantooda, nabi kasta dadkiisa keliya ayuu u diray.
8-Waa midka ugu horreeya qabriga ka dhanbalmi doona, waa shafeecaha ugu horreeya, waa qofka shafeecada laga yeelo kan ugu horreeya, waa midka ugu horreeya jannada albaabkeeda garaaci doona, Ridwaan -ilaaliyaha jannada- wuxuu oranayaa: waa kuma? wuxuu oranayaa: Mumaxed, Ridwaan wuxuu oranayaa: waxaa la i fary qof adiga kaa horreeya inaanan ka furin.
Waxaa ka mid ah mocjisooyinkiisa ­-naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee- :
- Dillaacidda dayaxa
- Isha ayuu u soo celiyay Qataada marka laga riday maalinta Uxud, waxay noqotay labadiisa indhood midda ugu fiican
- Lugta ayuu u soo celiyay Ibn Al-xakam marka laga jabiyay maalintii Badar.
- Markhaati gelintiisa uu geedka markhaati galiyay markaas geedka shahaadada ayuu qirtay seddex jeer gaalka oo hortiisa taagan, gaalkana wuu islaamay.
- Oohinta salka geedka oo uu ku khudbayn jiray -naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee- markuu ka tagay mana aammusin ilaa labadiisa gacmood uu ka saaro.
- Sidaas oo kale badinta uu badiyay cuntada hortiisa taallay ilaa ay ka cunaan labadiisa sacab muggooda dad ka badan siddeetan qof ilaa ay ka dhergaan.
- Sidaas oo kale badinta uu badiyay biyaha maalinta Al-xudaybiya markii aysan ku harin ciidanka dhexdooda wax aan ahayn hal weel biyo, gacantiisa ayuu saaray, waxay uga burqanayeen farahiisa dhexdooda sida ilaha oo kale ­-naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee- ilaa ay ka cabbaan muslimiinta kana weysaystaan, waxay ahaayeen wax ku dhow afar boqol nin.
- Sidaas oo kale waa loo dheelmiyay masjidka Al-aqsaa, ka dib wuxuu fuulay samadaha sare ilaa uu gaaro Sidratu Al-muntahaa.
- Mucjisooyinkiisa waxaa ka mid ah -naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee- sheekaynta uu ka sheekeeyay ummadaha hore iyo nabiyaasha, wuxuuna ahaa ummi wax qorin waxna akhrinin, sidoo kale waxa uu ka sheegay mustaqbalka, furashada Faaris iyo Ruum, iyo burburinta boqortooyada Kisraa kaas oo jeexjeexay warqadda Rasuulka Alle soo diray -naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee- iyo mucjisooyin kale fara badan.
- Mucjisooyinkiisa waxaa ugu weyn Quraanka kariimka, isaga waa mucjisada joogtada ah ilaa maalinta Qiyaame.
- Ka dib Alle xuskiisa kor ayuu u qaaday -naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee- magiiciisa wuxuu ku xiray magaca Alle, wuxuu ka dhigay shahaadada in Ilaah kale jirin Alle mooyee nabi Muxamedna rasuulkiisu yahay, tawxiidka waa waxa ugu horreeya addoonka islaamka ku soo galo, ayna habboon tahay inuu noqdo waxa ugu dambeeyo adduunka kaga baxo, qofkii hadalkiisa ugu dambeeya ah: Ilaah kale ma jiro Alle mooyee jannada ayuu galaa.
- Waxaa waajib nagu ah xagga nabigeena -naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee- inaanan ka hormarinin hadal qof khalqiga ka mid ah xadiiskiisa ­-naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee- ama aragti qof kasta la raaco amarkiisa, haddii dad ay kaaga hormareen inay isaga u hijroodaan adigana u hijrow sunnadiisa kuna dabaq arrinkaaga oo dhan, hana raacin qof kale, waxaa kaloo nagu waajib ah inaan isku xirnaano dhamaanteena xagga amarkiisa, marka aan u hoggaansanno ­-naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee- maxaayeelay
﴿مَّن يُطِعِ الرَّ‌سُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّـهَ﴾ ]النساء: 80 [
(ruuxii adeeca rasuulka wuxuu dhab u adeecay Eebe)
* Inaanan ugu yeerin Rasuulkii Allow mooyee -naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee- oran mayno Muxamed keliya.
* Inaan aadaabtiisa qaadano oo aan kaga dayano xaaladahiisa oo dhan -naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee- hurdaiisa, cunniddiisa, socodkiisa, salaaddiisa, soonkiisa, sadaqadiisa, jihaadkiisa.
* Inaan nafteena ka jeclaano iyo ilmaheena iyo waalidiinteena iyo dadka oo dhan
* Inaan jeclaano qofkii rasuulka Alle -naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee- jecel oo ku dayanaya, inaan nacno qofkii rasuulkii Alle -naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee- nacaya oo sharcigiisa aan qaadanin.
* Muslinka waxaa laga rabaa inuu jeclaado dadka mu'miniinta, una gargaaro iskuna ekeysiiyo, arrintooda inuu isku murjiyo oo wanaagga ugu kaalmeeyo, saaxiibana ka dhigto.
* Waxaa laga rabaa inuu gaalada naco iyo gaalnimadooda, inuusan adeecin, inuusanna la safanin gaalada isaga oo lid ku ah muslimiinta, inuusan ugu kaalmaynin baadilkooda, inuusan ciidahooda la wadaagin, waxaa xaaraan ka ah inuu dulmiyo, laakin cadaal ayuu kula dhaqmayaa.
* Waxaa nagu waajib ah inaan jeclaano hooyooyinka mu'miniinta, nabiga -naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee- xaasaskiisa, iyo inaan jeclaano asxaabtiisa -naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee- waayo waa dadka ugu khyar badan nabiyaasha ka dib.
* Sidoo kale waxaa nagu waajib ah inaan noolayno sunnadiisa -naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee- iyo inaan muujino shareecadiisa, iyo inaan gaarsiino diintiisa dadka oo dhan, ka dib inaan ku sabarno wixii aan kala kulmayno oo dhib ah jidkaas, waana lagama maarmaan.
* Maxaayeelay sunnada Alle ku fushay khalqigiisa waa inuusan jirin qof nabi ama wali oo xaqqa ugu yeeray oo aan la dhibin oo lala colloobin.
* Baraarug qofka muslinka ahow, diintaada yuuna kaa leexinin dhibka gaalada, waxaa la dhibay rasuulkii Alle -naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee- markii uu ku dhex jiray asxaabtiisa tirada yarayd, asxaabtana waa la dhibay wayna sabreen.
* Yuuna daaciifinin go'aankaaga markay kuu nisbeeyaan daldalan iyo ad'adkaan iyo dibudhac ama ay dhahaan: maskaxdiisa ayaa la dhaqay, waxaa kaaga sugnaatay rasuulkii Alle ku dayasho wanaagsan, waxaa lagu yiri: gabyaa, jinoole.
* Yuuna ku dhibin marka lagugu dhaho : xagjire lunsan baa tahay, sida ay gaalada mu'miniinta kula dhaqmaan ayaa sidan ah
﴿‌وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلاء لَضَالُّونَ﴾ ]المطففين: 32 [
(markay arkaan waxay dhaan kuwaan waa baadi).
* Miyayna kugu filnayn haddii dadka ay labo gees yihiin inaad ka mid noqoto geeska nabigaaga Muxamed joogo?!.
* Aayaddan u daa:
﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ‌سُولِ
سَبِيلًا﴾ ]الفرقان: 27 [
(Maalinta uu qaniinayo daalimka gacantiisa isagoo dhahaya shalleytee maan yeesho la jirka rasuulka jid (maan rumeeyo).
*Arrinta yayna isaga kaa dhex darsamin markay kugu dhahaan argaggixiye baa tahay ama sharbadne, kaas waa waxa ay ku tilmaamaan dadka qooqay mu'miniinta adduun iyo aakhiraba, markii malaa'igta ay wejiyaashooda ugu kaxayso Jahannmo way eegayaan waxay oranayaan:
﴿وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَ‌ىٰ رِ‌جَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَ‌ارِ‌﴾، ]ص: 62 [
(Waxayna dhaheen (madaxdii) gaalada maxaan la arki weynay rag aan ku tirin jirnay dadka xun xun).
* Halkaan ayaa waxaa uga soo dhawaaqay mu'miniinta -ay ku mgacaabi jireen kuwa sharta badan- iyaga oo darajooyin sarsare ee Fardowsa jooga:
﴿أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَ‌بُّنَا حَقًّا﴾ ]الأعراف: 44 [
(Waan helnay wixii Eebe noo yaboohay si dhab ah)
More in this category: « Rumaynta kutubta Rumaynta maalinta aakhiro »